Iyi Nyika Yenyika Kana Kuti Kuita Sei Vatengi Vanokuda - Marketing Strategies From Semalt Expert
Nyika yatiri kurarama yatinogara ndiyo chiziviso, nyika inodiwa. Pasina mitsotsi, pangave pasina chikonzero chezvinhu zvakadaro seTerevhizheni, redhiyo, kana zvekugarisana nevamwe. Zvinopera pasina kutaura kuti taizotofanira kubhadhara zvimwe zvezvinhu zvatinoda. 86% yehuwandu hwevanhu vanofunga kuti zviziviso zvakakosha pakufambisa zvinyorwa zvisingabhadhari paIndaneti - paracas tour. Zvisinei, hazvipi kupa vatengesi kodzero yekutigumbura nezviziviso. Aya ndiwo mazano mana anonzi Oliver King, Semalt nyanzvi, iyo inogona kuita kuti vatengi vafare.
Itai kuti Munhu
Hapana chinhu chinovhiringidza vashandi vanogona kupfuura mutengesi wemubhadhari uyo anoedza kukumanikidza kutenga ichi kana icho chigadzirwa pamutengo wose. Icho chinhu chikuru chekutendeuka uye hachina maturo kana zvasvika pakutendeuka. Vashandi vanogona kukunyengedza kana kutora mufambiro wako unosuruvarisa uye mhiko kuti haambobatanidzi newe kana mararamiro amunomirira.
Nharaunda yehutano yava kutora nzira yakawanda yevatengi-iyo iyo iyo yekutengesa digital urongwa hunofanira kuratidza. Vashandi vanofanirwa kurapwa nenzira yavanoda kurapwa. Nzira chete iyo vanogona kuita nayo izvi ndeyekuti vanoshandisa hutano hwevanhu uye analytics..Iro rubatsiro pakutsanangura manzwiro evatengi kuitira kuti vatengesi vagone kuvatsanangurira kana vachizoita nhaurirano dzechokwadi navo. Nokugadzirisa zvinhu izvi zvebhizimisi, mutengesi achave ari munzvimbo yekusimudza maitiro avo eSOO.
Itai kuti ive yakakosha
Zvakawanda sekuita munhu zvakakosha, hazvibviri kuziva uyo anoverenga imwe nhengo, nguva ipi yavanopinda nayo, uye zvimwe zvinhu zvavanogona kufarira. tevera. Vatengesi vanofanira kuziva kuti mazano anofanirwa kuva akakodzera kune zvinodiwa uye zvido zvemuverengi. Kana zvikabatanidza zvinyorwa kune zvinyorwa zvine chokuita nezvinodiwa nevadzidzi, asi zvingave zvisingambowaniki, iyo nzvimbo inova chinhu chakavimbwa uye chinokosha chakanakira SEO. Chigumisiro ndechokuti muparidzi anowedzera mari yakawanda panguva imwe chete achipa vatengi zvinhu zvisingakanganwiki zvakagadziriswa zvekuwana zviitiko izvo zvichaita kuti vadzoke zvakare kune zvakawanda.
Kune zvinhu zvishomanana izvo vatengi vanoona zvichivhiringidza kana zvasvika pakutsvaga kwema digital:
Makambani anotsvaga chimwe chinhu chavakangotenga sezvo asingabatsiri kune ani zvake ane nzvimbo shoma kana mari kuti agadzire asati apera.
Kudzokorora zviziviso pa Facebook nekuda kwezvinhu kana zvinhu zvavanenge vatenga.
E-mail subscription mabhokisi anoonekwa nokukurumidza kana mumwe achiwana zviri mukati.
Vatengesi vanofanira kushandisa kudhinda kwemajeri nenzira inoita kuti vatengi vave vakavimbika kwavari. Kuvhiringidzwa kwakataurwa kunogona kuita sediki, asi zvinhu zvishoma zvinowedzera. Pamusana pezvinhu zvisingagumi zvezvinhu zvinoenderana nezvavanoda, usavapa chikonzero chekusasarudza chauri kutengesa. Nekuongororwa kubva kune vateereri mazano uye nhepfenyuro yehutano, iva nechokwadi chekufananidza mabasa ose zvakanyanya kune zvavanoda.
Itai kuti iwirirane
Yekupedzisira asi kwete zvishoma ndeyekugadzira zvigunwe zvinogunzva manzwiro evanhu. Manzwiro anokurudzira zvikuru. Vamwe vatengi vanogona kuseka pamusoro pokuti mafungiro evanhu vanoita sei, asi havakwanisi kukanganwa munguva yemberi.